Malalaka ho any mpomban’ny FAT ny asa fanaovan-gazety fa tsy ho any ny firenena Malagasy ! – MyDago.com aime Madagascar
Malalaka ho any mpomban’ny FAT ny asa fanaovan-gazety fa tsy ho any ny firenena Malagasy !	Toy ny mahazatra dia tafavory teo amin’ny kianjan’ny finoana ny mpitarika sy ny vahoakan’ny ankolafy telo ; nafana dia nafana ny kabary nifandimbiasana tamin’izany :
– I Mamy, jeune TIM àry dia nilaza fa efa mitady ho lany tamingana ny foza eto an-tanàna ary raha ara-tantara dia volana May daholo ny tolona teto Madagasikara no nahitana vokany.Koa noho izany dia tokony ho samy manantena ny fandresena amin’ny tolona izany ny mpitolona rehetra hoy izy.
-I Dokotera Julien RAKOTO ihany koa dia nametra-panontaniana , inona no dinihanareo CST sy CT, ny vola tsy misy, ny vahoaka koa tsy mankatoha ? hoy izy. Fantatr’i Pr Zafy fa ny ankamarony ny mpitolona dia olon’i fioha Ravalomanana koa izany no antony nitsidihany any Bel Air hoy I Doc Julien.
Momba ny fizaran’I Adry Rajoelina fanamiana ny tafika androany dia mazava ny hafany : ny miaramila ihany ve no vokisana eto?
– Mamitiana RAVELONANOSY, pasitera sady depiote kosa dia nilaza fa anatra ho an’izay mpiziriziry ireny nahazo an’i Ben Laden ireny. 99 andro tokoa ho any ny mpanao ratsy fa ny iray andro an’Andriamanitra hoy izy.
Tany Maorisy i Vital ary niaraka taminy ilay namantsika taloha mba hampisehoana fa tetezamita iaraha-mitantana hono ny FAT, sandoka daholo anefa ireny hoy izy. Mihomana handray fanjakana, telo taona no tsy nazahoan’ny FAT fankatoavana iraisam-pirenena ka ao aorian’ny 20 may dia antsika ny fanjakana hoy izy.
– I Marcel, avy amin’ny ankolafy Zafy Albert kosa indray dia nakasitraka ny fihetsikin’ny prezida Zambiana lasa nitokana zava-bita fa tsy nandray an’i Andry Rajoelina.
Efa voaporofon’ireo manamboninahitra roa niaraka tamin’I Andry fa fanonganam-panjaka no teto ka miantso anareo SADC hampiasa ny “charte de Cotonou” izahay hoy I Marcel, mba tsy ho eo intsony i Andry ao aorian’ny 20 may izao. Tsy tompony anefa ireo ny SADC sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa mpamerin-doha, isika malagasy no tompon’ ny teny farany.
Herimpo very maina ihany koa ny anareo CENI satria tsy hanaiky mihitsy izahay fa miala miaraka amin’I Andry ianareo ary fantatray fa mampitahotra olona tsy mety manome izay mombamomba azy ny “agents recenseurs”. Efa tonga saina ny malagasy hoy i Marcel.
– I Pasitera Edouard dia nanambara fa mila fahagagana ity firenena ity satria betsaka no marenina, jamba ary moana. Misy efa sitrana ihany toy i Charles sy Noël. Raha ny tokony izy hoy I pasitera Edouard dia samborina i Andry Rajoelina dia tsaraina amin’ny tribonaly iraisam-pirenena izy sy ny namany rehetra.
Malalaka ho any mpomban’ny FAT ny asa fanaovana gazety fa tsy ho any ny firenena Malagasy hoy izy mikasika ny datin’ny 03 may.
FAT, tsy manaja ny zon’olombelona ny mampihorohoro mpanao gazety Avelao Hiasa ny mpanao gazety ! Ny HMF sy ny olan’ny firenena ankehitriny Auteur Solo Razafy*Publié le 3 mai 20113 mai 2011Catégories Politique	Laisser un commentaire Annuler la réponse.	Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *Commentaire Nom * Adresse de messagerie * Site web Prévenez-moi de tous les nouveaux commentaires par e-mail. Prévenez-moi de tous les nouveaux articles par email.	Navigation de l’article
Précédent Article précédent : VIDEO, kabary Magro Behoririka 03 mai 2011Suivant Article suivant : Mampitsanga-menatra raha i Rolly Mercia no hatao fitaratra amin’ny asa fanaovan-gazety !